Apple nwere ike ịmanye ịkpọ ndị ọzọ agba agba | Esi m mac
Ndị nwe Apple nwere ike ịmanye ụlọ ọrụ ahụ ka ha were ndị ọrụ ndị ọzọ agba
Ndị nwere oke Apple Inc. nwere ike ịme akụkọ ihe mere eme n'afọ ọzọ site na ikpebi ma ụlọ ọrụ ahụ ọ kwesịrị ịba. ọnụ ọgụgụ ndị isi nke agba maka agbụrụ dị iche iche dị ukwuu karị na ntuli aka na atụmatụ nke nọ na-eme oge ụfọdụ na onye meere iPhone gbalịrị ịkwụsị.
Nkwupụta a sitere n'aka onye na-achụ ego aha ya bụ Antonio Maldonado, onye nwere 645 mbak nke ụlọ ọrụ ahụ na onye ga-akụ ya Apple kwesịrị imeghe banyere ụdị dị iche iche agbụrụ agbụrụ na ọkwa profaịlụ dị elu dị ka pasent nke ndị ojii na ndị Hispanic ga-ebelata ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
James A. Bell (Onye otu ndị isi oche Apple)
Apple n'akụkụ ya kwuru na Securities na Exchange Commission na o kwenyere na ya ekwesighi itinye ntinye a kwuru na atụmatụ ya ebe ọ bụ na ọ bụ ọrụ nchịkọta na-enweghị isi ebe ọ bụ ezie na ha na-anwa mgbe niile ịnọgide na-enwe ụdị agbụrụ dị iche iche kachasị ekwe omume, onyinye ọrụ agaghị adị n'okpuru agba akpụkpọ anụ ma ọ bụ agbụrụ ya .
Ngalaba Na-ahụ Maka Ego nke SEC (Securities and Exchange Commission) na United States, kwuru n'akwụkwọ ozi emeghe na December 11, na ụlọ ọrụ ahụ ekwenyeghị na ụlọ ọrụ ahụ. Mana ugbu a ọ dịịrị Apple ma ọ bụrụ na a ga-etinye okwu a na ntuli aka na nzukọ ndị na - ekenye ego kwa afọ na 2016, nke edobeghị.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ikpebi etinyela isiokwu a na nzukọ ahụ, nke nwere ike ime ka SEC meghachi omume na nke a ebe ọ bụ na Apple azabeghị ozi ịntanetị ezitere ma ọ bụ oku ekwentị.
Site n'echiche m, Apple abụwo ụlọ ọrụ nke ejiri ụgwọ ọtụtụ mmadụ maka talent ha na ọbụghị n’ihi agbụrụ ya, ịbụ otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere agbụrụ dị iche iche karị nke ụwa, agbanyeghị mmiri anaghị ezo mmiri na uto onye ọ bụla ma enwere ike karịa otu onye ga-ahụ data a dị ụkọ ma chọọ ya ka ebunye ya n'elu ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ndị nwe Apple nwere ike ịmanye ụlọ ọrụ ahụ ka ha were ndị ọrụ ndị ọzọ agba
Echere ezigbo mpịakọta nke na-ekpughe ụwa ịchọrọ iji wuo. A na-atụle ịha nhatanha agbụrụ tupu ntozu oke nke ndị ga-aga ime ya? West na-eji nwayọ ebibi onwe ya.
Ọhụrụ ka OS X? Nke a bụ aghụghọ iji jikwaa ngwa ngwa ngwa ngwa
Otu Soy de Mac chọrọ gị Obi ụtọ na Afọ ọhụrụ 2016!